Alukho ushintsho kwezinye iziteshi zeSABC
UMSAKAZI woKhozi FM uBheka BK Mchunu omunye okuthiwa uhlelo alushayela ngoMgqibelo oluthi Itende Lomcimbi lenza kahle
NOKUBONGWA PHENYANE | March 24, 2020
ISABC imemezele ukuthi azikho izinguquko ezizokwenzeka eziteshini zayo eziyisithupha njengoba kuhlale kwenzeka ngo-Ephreli 1. Unyaka nonyaka kuhlale kunesasasa njengoba imisakazo engaphansi kweSABC isuke imemezela izinguquko kwesinye isikhathi esuke iza nabasakazi abasha.
Isolezwe like labika ukuthi isikhondlakhondla somsakazo uKhozi FM ngeke lube noshintsho ezinhlelweni. Esitatimendeni esikhishelwe abezindaba, kuqinisekisiwe ukuthi izinhlelo zizoqhubeka ngokujwayelekile. Imisakazo engeke ibenezinguquko kubalwa Ukhozi FM, Thobela FM, RSG, Umhlobo Wenene FM, Lotus FM nePhalaphala FM.
UNada Wotshela wakwaSABC, uveze ukuthi isinqumo sokuthi bangazenzi izinguquko kuleziteshi yingoba zenze kahle uma kuziwa kubalaleli, abakhule ngesivinini ngonyaka odlule.
“Lokhu kucacisa ngokusobala ukuthi icebo esalenza liyaqhubeka nokusebenza ekutheni iSABC ihlale ihamba phambili kuleli. Siyathemba ukuthi nakweminye imisakazo kuzoba khona uzinzo oluzothela izithelo ezinhle uma siya phambili,” kuchaza uNada.
Uthe kumanje Ukhozi FM lunabalaleli abangu-7.6 million, wathi isibalo sanyuswa izinguquko abazenza ngonyaka odlule.
“Izinhlelo ezihlukene kulo msakazo zenze kahle kakhulu. Kuzona sibala uhlelo Isidlo Sasekuseni, Itende Lomcimbi, Sigiya Ngengoma, Indumiso okuyizinhlelo ezinabalaleli abaningi kakhulu. Nasemsakazeni iThobela FM sibone izibalo zinyuka ngendlela emangalisayo usuku nosuku, ngakho ngeke sibe nazo izinguquko. Umsakazo Umhlobo Wenene FM, ngeke ube nezinguquko ngaphandle kokuvala isikhala sikaSiphiwo “Spitch” Nzawumbi, osulile ngeledlule.”
Emsakazweni iPhalaphala FM uthe izinguquko zizokwenzeka ohlelweni lwasekuseni iVhandilani njengoba uMpho Nefale eshiya kulolu hlelo kodwa manje seluzokwenziwa nguTerry Mudau yedwa.